उपत्यकाका फिल्म हलमा ‘बक्स अफिस’ लागू – आफ्नो समाचार
उपत्यकाका फिल्म हलमा ‘बक्स अफिस’ लागू
Afno News — २ श्रावण २०७५, बुधबार ०९:४१0comment
काठमाडौंँ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको बक्स अफिस मङ्गबार (साउन १ गते)बाट काठमाडौं उपत्यकामा लागू भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित कार्यक्रमा बक्स अफिसको औपचारिक उद्घाटन गर्नुभयो । बक्स अफिस लागू भएपछि ‘अनलाइन डाटा’मार्फत चलचित्रको आयको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ । यसले राजस्व संकलनमा राज्यलाई पनि ठूलो मद्दत पुग्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
बक्स अफिस एक प्रकारको केन्द्रिकृत ई–टिकेटिङ सिस्टम हो । यो प्रणालीमा कुन हलमा कति टिकट बिक्री भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क लिन सकिन्छ । टिकट बिक्रीका विषयमा अनलाइनमा नै रिपोर्ट देखाउने हुँदा हल सञ्चालकले लगानीकर्तालाई झुक्याउन नसक्ने बताउँदै आइएको छ ।
सम्पूर्ण हलहरुबाट सफ्टवेयर मार्फत् सर्भरमा लिङ्क गराउँदै यसले तथ्याङ्क संकलन गर्छ । सर्भरमा जम्मा भएको तथ्याङ्क फिल्मका निर्माता या वितरकलाई दिइन्छ । यसको सर्भर चलचित्र विकास बोर्डमा राखिएको छ । संयोजक महर्जनले बक्स अफिसको सम्पूर्ण डाटा एकै ठाउँमा संकलन हुने जानकारी दिनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै लुका मोड्रिच बने युरोपको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
शारीरिक सम्पर्क गर्दा महिलाको ज्यान गयो
१२ करोडको तास आयात !
वि.सं. २०७५ असार २५ गते सोमबारको राशिफल